Izindatshana zikaChris Bross Martech Zone |
Imibhalo nge UChris Bross
NgoLwesithathu, Okthoba 28, 2020 NgoLwesithathu, Okthoba 28, 2020 UChris Bross
Iklayenti lishicilela isikhangiso esikhokhelwayo esikhuthaza isilinganiso esisheshayo esikhangisweni… ikholi idluliselwa esikhungweni sezingcingo lapho kunikezwa i-quote. Eshu. Elinye iklayenti lizungezisa amagama angukhiye kaningi njengoba lingatholi ukuguqulwa. Eshu… ifomu lokuthenga lithumela ekhasini elingatholakali. Futhi elinye iklayenti lifaka i-CAPTCHA kwifomu yokukhiqiza ehamba phambili… engasebenzi nhlobo. Eshu. Zonke lezi yizibonelo ezibiza izinkampani izinkulungwane zamaRandi ezikhokhelwe
NgoMgqibelo, Ephreli 14, 2012 NgoMgqibelo, Ephreli 14, 2012 UChris Bross
Kwesinye isikhathi sishesha kangaka ukuthola isikhangiso ndawonye, ​​sizenzakalelayo emikhubeni emihle futhi asicabangi ngezindlela ezahlukahlukene zokunaka. Le yi-infographic evela ku-AdChop enemibono eyingqayizivele ekuthuthukiseni ukwakheka okuhlukile kwezikhangiso zokuhlola. Ukubona imiphumela abanye abakhangisi abayizuzile besebenzisa amanye amasu avela kule infographic, hlola izifundo ze-AdChop - uzobona izikhangiso ebezisebenza empeleni
NgoLwesithathu, Novemba 16, 2011 NgoMgqibelo, ngoFebhuwari 4, 2017 UChris Bross
Sithumele i-infographic enhle yokuthi i-Google Adwords Adrank isebenza kanjani. I-WordStream manje isungule le infographic ukukukhombisa ukuthi i-Google Adwords isebenza kanjani, inikeze ukuqonda ngomsebenzi owenziwa umsebenzisi wokusesha oholela ekubekweni kwesikhangiso. Ama-akhawunti weGoogle Adwords angama-97% wemali engenayo yokukhangisa ye-Google engu- $ 32.2 billion! Inikelwe yi-WordStream - uzakwethu oqinisekisiwe we-AdWords.
NgoMsombuluko, Novemba 14, 2011 NgoMgqibelo, ngoFebhuwari 4, 2017 UChris Bross
Sibonile amaklayenti amaningi eza kithi ngemuva kokulahlekelwa amathani emali eqhuba imikhankaso yawo yokukhokha ngokuchofoza ngakunye (PPC) eyedwa. Akukhona ukuthi abazange banake noma baphathe kahle ama-akhawunti, kungenxa nje yokuthi bebengazi ukuthi bangayithinta kanjani imiphumela yabo futhi bayithuthukise empeleni. Iningi labantu likholelwa ukuthi ukukhokha ngokuchofoza okukodwa kumane kuyimpi yokubhida futhi abazi nokuthi, ngokwenza ngcono ikhwalithi yezikhangiso zabo,
Ngakho-ke uqhuba ibhizinisi emakethe egcwele. Kungenzeka kakhulu, lokhu kusho ukuthi ubhekene namanye ama-CPC amahle kakhulu wamagama angukhiye. Noma mhlawumbe ungumnikazi webhizinisi elincane lendawo, ongathanda ukungena ekukhangiseni okuku-inthanethi kodwa ungazizwa sengathi unesabelomali esanele sokumaketha sokuncintisana. Njengoba ukuthandwa kwe-intanethi nokuthengiswa kwe-PPC kukhulile, kanjalo nokuncintisana, nakho okunyusa izindleko. Ngaphambi kokuthi uthathe isinqumo ngalokho
NgoMgqibelo, Ephreli 30, 2011 NgoMgqibelo, ngoFebhuwari 4, 2017 UChris Bross
Ngabe izikhangiso zakho zombhalo zivunyelwe ukwephulwa kokuhlela noma uphawu lwentengiso? Uma wenze konke kahle, kungani ukhwazwa yiGoogle? I-AdWords ayikwazisi ngokushesha, izikhangiso eziningi kakhulu zombhalo ezingabuyekezwa ngasikhathi sinye. Banama-algorithms abo azothola isikhangiso sakho sombhalo uma wephule inqubomgomo yabo. Ukutholwa kuhlala ngemuva kweqiniso futhi kungenalwazi oluningi lokuthi kungani. Kuyakhathaza kakhulu! Vele uthola i-
Ukuzenzekelayo kwe-PPC: Amagama angukhiye aPhelekile
NgoLwesibili, ngo-Mashi 15, i-2011 NgoMsombuluko, Okthoba 12, 2015 UChris Bross
Ezinyangeni ezimbili ezedlule, sezwa ngenkampani eyayibhide ngamagama angukhiye angaphezu kwesigidi. Abantu bezentengiso benkampani babecabanga ukuthi lokhu kuhle impela. Ngempela? Uma umuntu eneBhajethi enkulu ye-PPC, yini okungaba yiphutha ngokubhida ngamagama angukhiye amaningi kangaka? Ukugcizelelwa kwemidlalo ebanzi, "ye-Fat Head", akukho ukuthunyelwa kwamagama angukhiye we-Negative, nokusetshenziswa ngokungakhethi kwe-automation / Dynamic Keyword Insertion kuholela ekubonisweni kokukhangisa okungasebenzi / okuyishwa. Onyakeni owedlule, ngenkathi